အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ငရဲပန်းများ ဆီသို့
29 Responses to “ငရဲပန်းများ ဆီသို့”
ဘိန်းပန်းကို အ၀ါရောင်မှတ်နေတာ...အခုမှပဲ အဖြူရောင်မှန်းသိတော့တာပဲ...ဒေါ်ချောကတော့ စံပဲဗျို့...တကတည်း သွားလိုက်လာလိုက်တာမှ ၀ီကိုခေါ်နေပါရောလား...
ဦးဟန်ကြည်တို့ ဒေသမှာလည်း ဘာထူးသေးလဲ...အေ့ဒ်စ် သမားတွေ ပေါပါဘိ...တစ်ခါတစ်ခါ မလွှဲမရှောင်သာလို့ ဆေးထိုးအပ်ပြန်ကိုင်ပေးရရင်တောင် အတော်သတိထားယူရတယ်...ကိုယ့်လက်ကို အပ်ပြန်စူးရင် သွားပြီကိုး...ဒီကြားထဲမှာ ယာဘတွေကလည်း ပေါပါဘိသနဲ့...လူငယ်တွေဆို ရူးကြောင်ကြောင်လေးတွေဖြစ်နေကြတာ မမြင်ချင့်အဆုံး...နိုင်သလောက် ပညာပေးနေပေမယ့်လည်း အခုထိတော့ သုံးလေးယောက်ပဲ ကယ်နိုင်သေးသဗျား...
နောက်တစ်ပို့စ်ကို စိတ်ဝင်တစား စောင့်မျှော်နေပါကြောင်း...
ဆိုင်ကယ်သွားနေတဲ့ လမ်းကိုကြည့်ပြီး လန့်သွားတယ်။ ဒီလောက်လမ်းကြမ်းကြီးကို ခက်ခက်ခဲခဲ ပင်ပန်းခံသွားနိုင်တာ အံ့သြချီးကျူးမိတယ် ချောရေ ... ။
အဲဒီ ဘိန်းပန်း (ပေါ်ပီပန်း) တွေကို ဒီမှာတော့ အလှစိုက်ကြတယ်။ အိမ်မှာတောင် အပင်လေးတွေ ရှိတယ်။ ဘိန်းချက်တဲ့ ပေါ်ပီနဲ့ တူမတူတော့ မသိဘူး။ ပန်းပွင့်လေး ညှုိုးသွားတဲ့အခါ အစေ့လေးတွေ ကျလာရင် ခိုတွေ လာလာစားကြလို့ မမေက ခိုဘိန်းစားတွေလို့ နောက်နေရသေးတယ်။
အဲဒီလို တောင်ကြားထဲမှာ စိုက်ထားတဲ့ ပန်းတွေကို ကြည့်ရတာ လှတော့လှသားနော်။
ပို့စ်တပုဒ်ရဖို့ ကြိုးစား အားထုတ်ရတဲ့ ချောကို တကယ်လေးစားတယ်။
တောင်ကြီးနဲ့ တခြားမြို့လေးတွေ မှာတော့ အ၀ါရောင်ပေါ်ပီပန်းတွေကိုအလှစိုက်တာများတယ်
I got so much knowledge. The photo of top of the mountain view are nice. I'm lokking forward to read about how to make opium in your second post. Thank you, sis. Those kind of illegal drugs are so dangerous for human. A proper/good government inacountry should stop cultivation/producing/selling/using opium BUT....
ကျနော် တို့တိုင်းပြည်မှာ အဆိပ်သင့် တောင်တန်းတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ် ... သေးတယ် အစ်ရေ
အခုလို ဖော်ထုတ် ပေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ...
အဲဒီအခင်းတွေထဲကိုမိုင်းယောင်းဖက်မှာရောက်ခဲ့ဖူးတယ် ငယ်သေးတော့ ဘိန်းခင်းဆိုတာဘဲသိတာ အဲလောက်မခံစားမိဘူး ခုမှ တကယ်ခံစားတတ်လာတာ
ကျနော်တို့တစ်တွေ ဒါတွေကို ဘယ်လိုချေမှုန်းမှ အမြစ်ပြတ်ပါ့မလဲနော်
ဒီလောက်ကြမ်းတမ်း တဲ့ ခရီးလမ်းကို သွားတာ ချီးကျူးပါတယ်ဗျာ
ဒါနဲ့ နောက်ပိုစ့် ထဲမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ သူ တွေကို စိတ်ဝင်စားနေတယ်
ဘိန်းဘုရင် တွေနဲ့ တွေ့ခဲ့တာလား ဘိန်းဘုရင် နဲ့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး သူက ချော လက်လှမ်းမမှီနိုင်တဲ့ နေရာမှာ အကောင်ကြီး လုပ်နေမှာ ... ဇိမ်ကျနေမှာ ဒီလိုနေရာ လာမှာမဟုတ်ဘူး
အစ်မရေ၊ အဲလို ခက်ခက်ခဲခဲနေရာကို သွားတယ်ဆိုတာ နည်းတဲ့ သတ္တိမဟုတ်ဘူး။ ချီးကျူးတယ်။ နောက်တစ်ပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားသွားပြီ။
အစ်မချောရေ..သွားခဲ့တဲ့လမ်းတွေကိုကြည့်ရင်း ကြောက်တောင်ကြောက်မိတယ်။ အစ်မသွားရဲတာ တစ်ကယ်ချီးကျူးစရာကောင်းတယ်။ ဘိန်းခင်းတွေမြင်ရတာလည်း ကြက်သီးမွှေးညင်းများတောင် ထမိပါရဲ့။
ဘိန်းပန်းကတော့ ချစ်စရာ။ နောက်တစ်ပိုင်း မြန်မြန်ဆက်ပါး))
ဘိန်းပန်းက လှမှလှ မမချောရယ်...
ဒါပေမဲ့ မမြင်ရတဲ့ စက်ဆုပ်ရွံရှာမှုတွေက သူ့ ဆီမှာအပြည့်အ၀ပါပဲလား...
သြော်..လူငယ်တွေက ဒါကိုမသိဘဲ သုံးပြီး
ဘသတွေ ချို့ တဲ့ကြ...
ရောင်းတဲ့လူတွေက တိုက်ကြီးကြီး ကားခန့် ခန့် နဲ့ 
ခန့် ညားနေကြလို့ ...
သူတို့ တွေက ငွေနဲ့ ခွံကျွေးနိုင်တယ်ဆိုတော့လည်း
ရတောင့်ရခဲ ဓါတ်ပုံတွေ နဲ့
ဘိန်းပန်းဆိုတာတီဗီထဲမှာပဲတွေ့ဖူးတယ် မချောရေ တော်တော်အပင်ပန်းခံနိုင်တာပဲနော် နောက်လာမဲ့ပို့စ်ကိုအရမ်းဖတ်ချင်နေပြီ...
ဓါတ်ပုံတွေ့ကတော့ အရမ်းလှပါတယ်၊ ဒီ တန်ဖိုးတန်ခရီးသွားပို့စ်လေးကို စိတ်ဝင်းစားစွာ အဆက်စောင့်မေပါမယ်။
ပို့စ်တစ်ပုဒ်တိုင်အတွက် အချိန်ပေး၊ ငွေကုန်၊ လူပမ်းနဲ့ စေတနာထား၊ အပင်ပမ်းခံတဲ့ ချောရဲ့ စိတ်လေးကို အရမ်းချစ်တယ်။ အခုဆို ဒုတိယပိုင်းအတွက် အားထုတ်နေပြီဆိုတာ သိတယ်။ နေကောင်း ကျန်းမာအောင်လဲ နေဦး။ ဒုတိယပိုင်းလဲ မျှော်နေမယ်..။
လမ်းကတော့ ရှယ်ပဲ။ သေချင်စော်တောင် နံသွားလောက်တဲ့ လမ်းမျိုးပဲ။ အဲဒီလို သွားရတဲ့နေရာမို့လို့လည်း ဒီလောက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် စိုက်ပျိုးထားတာများလားမသိဘူး။ ငရဲပန်းလို့ တင်စားထားတာ အင်မတန် သင့်လျော်လွန်းတယ်။ လွယ်လွယ်ဝယ်လို့ရတာရယ် သုံးတဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေ များနေတာရယ်ကြောင့် ဆေးစွဲတဲ့ လူငယ်တွေ ထပ်ပြီး တိုးပွားလာနေအုံးမှာပဲ။ စိတ်မောဖို့ ကောင်းတယ်။
ခုတလော မျက်စေ့မကြည်လို့ ဘလော့က စာတွေ လိုက်မဖတ်ရတာကြာပြီ။
ချောရဲ့ဇွဲနဲ့သတ္တိ၊ စာဖတ်သူအပေါ်ထားတဲ့စေတနာတွေကို ချီးကျူးပါတယ်ကွယ်။
ဟုတ်ပါ့ချောရယ် လမ်းကလည်း ဆိုးလိုက်တာနော်။ ဘိန်းပန်းလေးတွေက လှသလောက် ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ နောက်လာမဲ့ အပိုင်းကို စိတ်ဝင်တစား မျှော်နေပါတယ်ချောရေ....
အဲဒီ ထဲမှာ ဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတာ စောင့်မျှော်နေပါတယ်.. မချော...
ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ရုံနဲ့ တင် မချော ဘယ်လောက်တောင် အပင်ပန်းခံပြီး သွားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်တယ်... မချောရဲ့ စေတနာနဲ့ ဇွဲသတ္တိကို တကယ်လေးစားမိပါတယ်... နောက်ဘာတွေ ဆက်တွေ့ ရမယ် ဆိုတာကိုလဲ သိရဖို့ ဒုတိယပိုင်းကို မျှော်နေပါ့မယ်...
ဖတ်ရ၊ မြင်ရတာ ရင်တထိတ်ထိတ်ပါလား မချောရေ။
ပန်းလေးတွေကတော့ ကြည့်ရတာလှလိုက်တာ။ ပန်းလေးရဲကအတွင်းက ဂုဏ်သတ္တိကတော့ လူသားတွေရဲ့ဘဝကို ဝါးမြိုပစ်ဖို့ပါလား။
@မောင်ဘုန်း ရေးသွားသလိုပဲ အဆိပ်သင့်တောင်တန်းတဲ့။
တော် တော် တန် တန် စေတနာ နဲ့ ဒီ ပို့စ် ကို ဖန်တီး ဘို့ မလွယ်ပါ။ တကယ် ပါ။ အသက် အန္တရာယ် နီးပါတယ်။ မြင် ရ တဲ့ လမ်း ပေါ် မောင်းနေတဲ့ ဆိုင်ကယ် နောက် က လိုက်ရင်တောင် တော်တော် အန္တရာယ် များနေပါ ပြီ။ New York time သတင်းစာ က သတင်းတောက် တောင် အဲဒီ လို သွားရဲ မှာ မဟုတ်ဘူး။ လမ်း အန္တရာယ် များသလို၊ င ရဲ ပန်း ခင်း ပိုင်ရှင် တွေ ငြို ညှင် မှာ လည်း ပူ ရ သေး နော်.. တော် ပါ တယ် ဗျာ... တကယ် ကွင်း ဆင်း လေ့ လာ ပြီးရေး တာ မို့ အလွန် တန် ဘိုး ထား ဖတ် သွားပါတယ်။ အားပေးလျှက်.
လမ်းက တော်တော်ဆိုးတာပဲ..အပင်းပန်းခံ ပို့ စ်တင်ပေးတဲ့ မချောရေ ကျေးဇူး..နောက်ပို့ စ်ကို စောင့်မျှော်နေတယ်ဗျို
I have seen the poppy flower inating village near Thai/Burma border. They have red / orange / white colors flower.The seedpods are green. I scraped the seedpod withastick and they smell so nasty. I think they boil the sap/juice to make black opium.
Any way the vegetable that grow in poppy field are very very tasty. I tried it once and still remember the taste of it. :-) That wasasmall town in Kachin state.
မချောမို့လို့ (၃)ရက်လောက်နာတယ်၊ နတ်သမီးဆိုရင် (၁)ပတ်တောင် အနာပျောက်ပမလားပဲ၊ ဖြတ်သန်းရတဲ့လမ်းခရီးက တော်တော်ဆိုးတာပဲ၊ ဓာတ်ပုံထဲမှာတွေ့ရတဲ့လမ်းက ဆိုင်ကယ်လမ်းဆိုလို့ မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ အဲဒီလို ခက်ခဲတဲ့ကြားထဲက ရိုက်လာတဲ့ပုံလေးတွေရော ဗဟုသုတတွေကိုပါ မျှဝေတဲ့ မချောကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နတ်သမီးကတော့ ဒီတစ်သက် အဲဒီလိုနေရာကို ရောက်ဖို့ အခွင့်ရှိမယ်မထင်ပါဘူး၊ လူခံရှိမှလည်းဖြစ်မှာ။ ကျေးဇူး မချော..း)
ဒီလောက်ကြမ်းတမ်းခက်ခဲတဲ့ လမ်းကိုသွားပြီး ဒီပို့စ်ကို တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မချောရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ လုံ့လကို လေးစားလျှက်ပါဗျို့။